Home / Interior design / Reinvent The Rustic isan'andro, fiainana mety amin'ny zaridaina an-tanàn-dehibe 丨 LICO Design
2021 / 07 / 31 FisokajianaInterior design 5427 0
Amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainana isan'andro tsotra sy ny famelana toerana hiaina sy hifanakalo hevitra, ny fahatsapana ny fahefana tany am-boalohany dia hamoha voajanahary amin'ny fikorianan'ny rivotra, ny mason'ny maso ary ny fahitana taorinan'ny fahitana.
Fitakiana fiainana mety
City Garden dia fonenana avo lenta ao afovoan-orinasa ao amin'ny tanànan'i Jiangbei ary mankafy ny fidirana irery mankany amin'ny farihin'i Swan, loharanom-pahalalana vidy ao an-tanàna. Amin'ny maha toeram-ponenana voalohany ny fianakavian'ny tompona hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana, dia nankinina tamin'ny serivisy famolavolana tetikasa iray manontolo ny fiainana LICO. Ny tompony dia mirotsaka amin'ny sehatry ny famatsiam-bola sy ny varotra trano, miaraka amin'ny soatoavin'ny fianakaviana matanjaka sy ny tontolon'ny fianakaviana mirindra. Manana fomba fijery mivelatra izy ireo ary mifantoka amin'ny antsipirian'ny fiainana, ary manana kalitao kanto avo sy tsiro kanto tsy manam-paharoa. Niara-nipetraka tamin'ny reniny sy ny zanany ary ny mpikarakara azy manokana foana izy. Izy dia niara-nipetraka tamin'ny reniny, ny zanany ary ny mpikarakara tokantrano tsy miankina. Ny fananana novidiny dia singa roa mifanila miaraka amin'ny velarany 160 metatra toradroa, ary antenainy fa hamorona trano idealy sy kalitao vaovao ho an'ny fianakaviany ny LICO.
Tetikasa fiainana mety
Miorina amin'ny fahazaran-tenan'ny tompona, ny fitakiana fiainana manana kalitao ary ny endrika famolavolana LICO momba ny "Drafitra 50%", ny ekipa mpamorona LICO dia naka ny "famolavolana ny fiainana isan'andro miaraka amin'ny estetika miasa" ho paikadin'ny famoronana amin'ity tranga ity, ary mifantoka amin'ny hevi-piainan'ny "Mamelona fiainana", mba hahatsapany ny fahatsoran'ny tompony tsotra, fifohana rivotra ary ny fahatsapana ny fonenana sahaza azy.
Mba hahamora kokoa ny fikarakarana ny fiainan'ny loholona, ​​ny fanajana ny fahazarana niainan'ireo loholona tany am-boalohany ary hanohizany ny toetran'ny mpianakavy mafana, ary hahafahan'ny loholona hanana fiarahana bebe kokoa amin'ny zanany, ny ekipan'ny LICO dia nanolo-kevitra ny tompony mba sokafy ny efitrano roa mifanila aminy ary atambaro ho iray. Io dia mamela ny faritra ampahibemaso ho an'ny mpianakavy hitatra tanteraka sy ny habaka iainana malalaka sy malalaka kokoa, ary ny fampifangaroana ny asan'ny habakabaka sy ny seho mivelatra dia mora kokoa sy mifampiresaka.
Ny firafitry ny asan'ny habakabaka dia mifototra amin'ny teboka fisainana ny "famerenana ny fiainana isan'andro", ary ny efitrano fandriana, ny fianarana ary ny efitrano fidiovana misy toetra manokana tsy miankina dia zaraina amin'ny lafiny roa amin'ny faritry ny hetsika ho an'ny daholobe. Ny loholona dia afaka mahazo orinasa bebe kokoa amin'ireo ankizy ary mihevitra ny tsiambaratelon'ny fiainan'ny tompony. Ny fandinihana dia miaraka amina fandrian-jaza miafina, mba tsy hanelingelina ny tompovavikely sy ny zaza ny tompony rehefa avy miasa izy amin'ny alina be. Ho fanampin'izany, tsara ny manonona fa misy am-patana noforonina manokana teo amin'ny faran'ny fandroana an'ny trano fidiovana an'ny tompony, mba hampihenana ny fahatsapana mari-pana ambany amin'ny fandroan'ny tompony amin'ny ririnina, ary koa hanampiana fahalianana amin'ny fiainan'ny tompo sy ny tompovavy.
▲ Mihantona ny fizarazaran'ny lafiny fidirana
▲ antsipirian'ny fizarazarana
Ny efitrano fandraisam-bahiny, ny efitra fisakafoana ary ny efitrano fisotroana dite dia misokatra sy miara-monina. Ny fatana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia manolo ny fahitalavitra, manome toerana malalaka ho an'ny fianakaviana sy ny vahiny mba hifampiresahana sy hiresahana. Ny lakozia, lalantsara, ny efitranon'ny mpivaro-kena sy ny terrasika dia mifamatotra, ka manamora ny fanaovan'ilay mpitondra kapoaka ny manao ny asany andavanandro sy mankafy ny hakanton'ny zaridaina ao amin'ny teras terrain. Ny fahitalavitra manokana amin'ny sofa ao amin'ny efitran'ireo loholona dia mety ho an'ny loholona mba hiala sasatra sy handalo ny fahasosorana.
▲ Ny fatana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny no misolo ny fahitalavitra
Ny partition foyer antsasa-mihantona dia apetaka amin'ny efitran-kiraro fidirana sy ny efitrano fandraisam-peo: rehefa mody ny tompony ary miova ny toetran'ny asa mandritra ny andro dia afaka mahatsapa ny fientanentanan'ny tsirairay ny fianakaviana nefa tsy mifanelingelina. Rehefa miditra sy mivoaka ny efitrano fandraisam-peo amin'ny alàlan'ny fidirana ireo vahiny sy namana dia afaka mahatsapa ny fihetsiky ny olona izy ireo ary manalavitra ny fijerin'ny maso.
▲ Ny faritra an-dakozia dia mijery eo amin'ny efitrano fisakafoana misokatra
▲ Ny rindrin'ny fizarazarana izay azo ampiasaina sy haingo
Betsaka ny antsipirian'ny endriny. Ny antsipirian'ny famolavolana habakabaka dia avy amin'ny fahatsiarovan'ny ekipa LICO, fahatsapana, fisamborana ary famolavolana ny fiainana isan'andro. Ny fiainana idealy dia tsy mila voaravaka volamena sy volafotsy, na mihoa-pefy amin'ny vatan-kazo sy tsanganana voasokitra, na fanangonana manaitra, fa tsy maintsy mahatsapa ny fitiavana sy ny maripana tany am-boalohany izy. Ary io fahatsapana tany am-boalohany io, rustique, miaina, angamba no niandohan'ny hatsarana sy fahasambarana eo amin'ny fiainana. Io ihany koa ny valin'ny ekipa LICO amin'ny famoronana sy fahatsapana ny fiainana lavorary.
Tsotra, miaina, fahatsapana tany am-boalohany, mamelona fiainana
Ny tena fiainana dia tsy mila ho hita hatraiza hatraiza, eto dia eto. Ny ilaina dia ny mamelombelona ny fahatsapana tany am-boalohany. Amin'ny famolavolana ny fiainana tsotra isan'andro, famelana toerana ho an'ny fifohana rivotra sy fifanakalozan-kevitra, ny fahatsapana tany am-boalohany dia hamoha voajanahary amin'ny fikorianan'ny rivotra, ny mason'ny maso ary ny fahitana taorian'ny fahitana. Ny rano marina tsy misy hanitra, ny tena fitiavana tsy misy endrika, ny tena fitiavana tsy misy feo, ary ny fiainana dia averina amin'ny fiainana. Ny filaharana avo indrindra amin'ny fitiavana milamina sy mafana indrindra dia ny FM voajanahary mitohy. Rehefa akaiky, tsy misy toerana, rehefa irery, fanajana. Ny fahalalana ny refy, mitazona ny refy, ny fifehezana ary ny fahalemem-panahy lava. Mamerina amin'ny laoniny ny fiainana isan'andro ary miantso indray ny fahaizana mahatsapa fitiavana. Izy io dia trano tsy miankina zaridaina an-tanàn-dehibe, izay trano onenana mety tsara amin'ny fahatsorana, fofonaina ary fahatsapana am-boalohany.
Anaran'ny tetikasa: Toeram-ponenan'olon-tsotra an'ny Garden City an'ny fiainana mety
Volavola: LICOLICO Design
Taona nahavitana: 2020.12
Main Design ： Liang Sheng Zhong
Ekipa mpamorona: Zhu Yanghuan, Lin Feng, Dong Huabin, Luo Quyue
Tale teknika: Sin King Wah
Fanatanterahana ny fanamboarana: He Changhui
Adiresin'ny tetikasa: No.18, làlana 1st Wenchang, Distrikan'i Huicheng, Huizhou
Faritra fananganana: 320㎡
Zon'ny mpamorona sary: ​​SUNWAY Mountain Vision
Anaran'ny mpanjifa: trano fonenana tsy miankina amin'ny Garden City
Mpanorina / talen'ny famolavolana ny LICO Design
LICO Design, mpamatsy tolotra famolavolana tetikasa feno miaraka amina endrika lamaody an-trano ho fotony. Mino izahay fa ny firafitra sy ny fanaingoana ny trano dia injenieran'ny rafitra matihanina sy henjana.
Azafady mba hajainay ny vinan'ny mpanjifa rehetra sy ny fitiavana ny fiainana ary averinay amin'ny laoniny ny filàna sy ny nofy rehetra, mba hahafahan'ny mpanjifa mahazo aina, tsy misy ahiahy ary milamina.
Previous :: 95% amin'ny olana mihidy dia azo vahana miaraka amin'ity andiany iray ity! Next: Ny herin'ny asa-tanana hamoronana toerana feno fitomboana ara-dalàna. Feimo Design
2021 / 08 / 15 6113